Ụbọchị My Pet » 7 Mmekọahụ Eziokwu Ga-Fụọnụ Your Mind
Mmekọahụ. Anyị niile maara ya na ọtụtụ n'ime anyị nwere ya. Ma gịnị ka anyị na-maara n'ezie banyere mmekọahụ? Olee ihe anyị maara banyere orgasms, amụ size, na sexercise? Anyị weere a ndepụta 7 ijuanya eziokwu na ga-ahapụ ndị enyi gị na ndị hụrụ egwu.
Eziokwu #1: Mgbe chịm, nkezi amụ size bụ 5 ka 5.7 sentimita asatọ ogologo
Dị ka na-adịbeghị anya ọmụmụ mere site Paris si National Academy nke Ọmụmụ, ọtụtụ ụmụ okorobịa ụfọdụ 5 ka 5.7 sentimita asatọ ogologo na 3.9 ka 4.1 gburugburu mgbe kpaliri. Ya mere megidere nkwenkwe, na ọtụtụ ndị na-adịghị a 7 nke anụ ọhịa ahụ amụ.
Eziokwu #2: Mgbe kpaliri a nwaanyị ikpu n'ezie erukwa
Otu nkezi ikpu bụ Elezie 3 ka 4 sentimita asatọ ogologo. Mgbe kpaliri Ọ pụrụ n'ezie mụbaa ruo narị abụọ percent, Dị ka nnyocha na. Ya mere na a, size n'ezie adịghị mkpa.
Eziokwu #3: Inyom orgasms nwere ike ịdịru ruo 4 ugboro dị ka ogologo oge ndị
The nkezi nwoke orgasm dịruru banyere 6 sekọnd mgbe a nwaanyị dịruru banyere 20.
Eziokwu #4: Na nkeji iri atọ nke mmekọahụ ga-enyere apa ọkụ 200 calories
Dị ka otu isiokwu e bipụtara na nwanyị na-Day Magazine, mmekọahụ nwere ike ịbụ elu-kalori ọkụ. Ihe dị mkpa bụ ime ka mmekọahụ na-ekpo ọkụ na-adịru ogologo. Eze ume ma na ịkwa ákwá nwere ike inyere ọkụ ọzọ calories. Ụzọ ọzọ bụ ka ịgbanwee elu ọnọdụ na ọbụna imebiga ihe ókè ọnọdụ. Dị ka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị bụ n'elu-agbalị na-akpụ akpụ gị hips dị ka a afọ n'ịgba egwú. Ndị ọkachamara na-ekwu na ndị inyom bụ ndị na nweta ihe orgasm n'oge mmekọahụ na-ọkụ ọzọ calories.
Eziokwu #5: The nkezi ọsọ nke ejaculation n'oge a nwoke orgasm bụ iri abụọ na asatọ kilomita kwa hour
Ọrụ mmụọ ọjọọ; Otú ọ dị, Ozugbo spam ịbanye ikpu ha ukwu-akwụsịlata. Ọ na-ewe spam 5 nkeji ime ka 6 nke anụ ọhịa ahụ na njem nke iru cervix. Ọ nwekwara ike na-spam ruo 72 awa chọta egg, dị ka Mark Elliot, Director nke Institute maka psychological na mmekọahụ Health.
Eziokwu #6: Dị Mfe ọnọdụ nye kasị ufiop orgasms
Ọ bụrụ na ị na-achọ a n'uche-ndifri, bed-rattling orgasm rapara isi. Dị ka mmekọahụ educator Dorian Solot, mgbe na-agbalị ọhụrụ, ihe mgbagwoju anya na ọnọdụ, i lekwasịrị anya bụ na-agbalị ịchọta itule vesos n'ezie mmekọahụ. Na ole na ole mgbanwe na omenala mmekọahụ ọnọdụ, ị pụrụ ime ka ha ọbụna karịa orgasmic.
Eziokwu #7: Yoga nwere ike inyere ntọt agụụ, orgasms, na afọ ojuju nke mmekọahụ
Great mmekọahụ bụ otu n'ime ndị kacha uche-ahu ahụmahụ, na otú ahụ bụ yoga. Ọ bụghị naanị na yoga a oké nchegbu aspirin ma ụfọdụ ọnọdụ ka mma postcho, mgbanwe, ọbara eruba, na-emeghe obi gị – niile ukwuu n'ihi na a na-ekpo ọkụ mmekọahụ ndụ. Yoga-enyekwa aka na-akụziri mindfulness na ndụ na ugbu, ihe abụọ ọzọ na-enyere aka-atụgharị ezi mmekọahụ n'ime oké mmekọahụ.
5 Ụzọ ghara oi Nọ ná Mkpa